Mbola ho lavitr'ezaka ny fahalalahana
Mahonena ny fiainana ankehitriny. Tampenam-bava ny mpanao gazety ary ny marina dia ny vahoaka no tiana tsy hiteny. Raha tsorina ny resaka "Rahaga Jean-Luc " sy "Ramanoelina Didier" dia ny tsy tokony ho ireo roa ireo no hiditra am-ponja fa andeha atao hoe an'ilay "mpamaky" izay nandefa ny ahiahiny sy ny tahony manoloana ny gaboraraka misy eto amin'ny firenena. Tsy iverenana ny resaka nahaovasazy azy mirahalahy fa raha samy tia hanao bontolo ny rehetra dia azo atao ny manosika ny gazety sy ny haino aman-jery rehetra hamoaka ilay taratasin'ny mpamaky ka ho sahy hanagadra ireo talen'ny famoahana sy tonian-dahatsoratra miisa efa ho an'ny 50 any ve ? Misy ireo ministra sasany izay voatonona anarana kanefa tsy mba nitroatra, tsy nampakatra ny raharaha. Sao dia efa mba fanararaotam-pahefana ary izao ? Tonga amin'ilay fitenenan'ny maro hoe "tsy mahazaka poste" ? Mila averina amin'ny rehetra fa tsy natao hanatsara endrika na hipasoka na hanao dokam-barotra ny fitondrana ny mpanao gazety. Mahaleo tena tanteraka, tsy miankin-doha izy amin'ny atao saingy anjaran'ny tsirairay kosa ny miasa am-pamendrehana sy am-pahamalinana tanteraka manoloana ny kolikoly, ny tandrevaka, ny tsy firaharahiana hanaovana fanadihadiana lalina sy maika. Misy ireo ministera mandefa tatitra moomba ny zava-nitranga na asa nataon'ny lehibeny kanefa tsy mitonona sy tsy mametraka laharan-tariby akory iantsoana azy raha toa ka misy ny ilàna azy. Hatrizay, ireo loharanom-baovao ofisialy hatrany no noraisina ho marina, kanefa rehetra tonga ny fotoana hangatahana fanampim-panazavana mahaksika raharaha iray dia ireo loharanom-baovao ofisialy ireo ihany no manakatom-baravarana tsy manome ny vaovao ilaina. Miasa anaty fahamehana mandrakariva ny mpanao gazety kanefa misy telo volana na herintaona na tsy mivaly mihitsy ny fangataham-potoana napetraka.
Teritery lava ny eto. Tsy misy izany fahalalahana izany. Misora-tena ho mpanaja ny zon'olombelona sy manaja fatratra ny fahalalahany ny mpitondra kanefa hafa no ataony. Ny kibay an-kelika ihany. Porofo mivaingana izao miseho izao. Na dia mety ho niafina tamin'ny taratasin'ny mpamaky aza ny mpanao gazety, marina ny voalazan'ny fitenenana hoe "manelingelina ny marina". Be izay olona nitondra izay fa mahatorovana sy mahafadiranovana ny afitsoky ny olon-dehibe ankehitriny.
Hiatrika fitsarana ireo mirahalahy anio tolakandro. Asa izay sary hihatra eo fa toa mifototra mantsy ny fijery ny zava-nanjo azy ireo. Tsy naleo ve nitazona azy teny amin'ny "violon" toy izay tonga dia tany am-ponja? Raha mitanila eo kosa aloha ny fitsarana dia...